पुरुषलाई थाहै नहुने महिलाका यी ७ रहस्य ! - Kohalpur Trends
एजेन्सी, पुरुष र महिला भिन्न भएर पनि एकअर्काका परिपूरक हुन् । एकको अस्तित्वबिना अर्को सम्भव छैन । महिलालाई पुरुष एवं पुरुषलाई महिलाको आवश्यकता पर्छ । अधिकाँश पुरुषलाई महिलाको बारेमा त्यति नै थाहा हुन्छ जति उनीहरुले देख्छन् र सुन्छन् ।
खासमा धेरै पुरुषलाई महिलाका रहस्यबारे जानकारी नै हुँदैन । त्यसैले होला एक साहित्यकारले महिलालाई ‘फरेन ल्याण्ड’ अर्थत विदेशी भूमिको सज्ञा दिएका छन् । कहिले काँहि पुरुषहरु महिलाको बारेमा राम्रो ज्ञान भएको ठानेर भ्रममा समेत पर्ने गर्छन् । किन कि कतिपय यस्ता कुरा हुन्छन् जुन महिलाले पुरुषलाई थाहै दिँदैनन् ।
पुरुषलाई थाहै नहुने महिलाका ७ रहस्य-
-एक महिला अर्की महिलासँग प्रेम गर्छे महिला पुरुषसँग मात्र आकर्षित हुन्छे भन्ने ठान्नु भएको छ भने तपाइँ गलत हुनुहुन्छ । खासमा एक महिला अर्की महिलाको दु’श्मन ठानिएपनि महिलाले महिलालाई एकदम प्रेम समेत गर्छन । कतिपय महिलालाई आकर्षक बनेर हिँड्ने महिलालाई बारम्बार देख्न मन समेत लाग्ने गर्छ ।
-पूर्व प्रेमीको निगरानी केटीहरुले विवाह भएपछि वा नयाँ प्रेम सम्बन्ध शुरु भएपछि पनि पहिलो प्रेमीलाई विर्सन सक्दैनन् । उनीहरुले पूर्व प्रेमिका गतिविधी नियालीरहेका हुन्छ्न् । उ कहाँ जान्छ । कोसँग भेट्छ वा कस्ता फेसबुक अपडेट राख्छ भन्ने कुरा विचार गर्छन् ।
– अ’श्लिल चलचित्र हेर्न महिलालाई पनि मन पर्छ अ’श्लिल चलचित्रका पारखी पुरुष मात्र हुन्छन् भन्ने सोंच्नु भएको छ भने तपाइँ ग’लत हुनुहुन्छ । खासमा केटीहरु पनि अ’श्लिल चलचित्र हेर्न मन पराउँछन् । तर उनीहरुले यस्तो चलचित्र हेरेको कुरा कहिल्यै पनि स्वीकार भने गर्दैनन् ।
-आफ्नै शरीरसँग प्रेम हरेक महिलालाई सबैभन्दा बढी प्रेम आफ्नै शरीरसँग हुन्छ । खासमा शरीरको विषयमा पुरुषले गर्ने न’कारात्मक टिप्पणीले केटीको सबैभन्दा बढी चित्त दुख्छ ।
– एक्लै हुँदा महिलाहरु एक्लै हुँदा अनेक ह’र्कत गर्छन् जुन अरु भएको बेला गर्न मिल्दैन । तर यो कुरा उनीहरुले अरुसँग भन्न मन पराउँदैनन् । ब्रा लगाएर नाच्नु वा विभिन्न पोज दिएर ऐना हेर्नु जस्ता क्रियाकलाप एक्लै भएको बेला गर्छन् ।
– -इ’र्श्या कुनै पनि महिलाको लागि प्राकृतिक गुण नै हो भन्दा पनि हुन्छ । विवाह गरेपछि हतारमा आमा बन्न नचाहने केटी अरुका सन्तान देखेर भने इ’र्श्या गर्छन् । आफूलाई महिलाका समस्याका कारण पी’डा हुँदा पतिलाई पनि त्यस्तै भैदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
– रहस्य जान्ने इच्छा हरेक महिलालाई आफ्ना पुरुष साथीप्रति केही न केही कुरा लुकाएको सं’का हुन्छ । उनीहरु त्यो कुरा जान्न चाहिरहेका हुन्छन्
The put up पुरुषलाई थाहै नहुने महिलाका यी ७ रहस्य ! appeared first on The Buddha Khabar.
Previous Previous post: भूमि आयोगले नियमावली बिनै काम थाल्यो
Next Next post: सर्वोच्चको आदेश : सुधीर बस्नेतलाई तत्काल पक्राउ नगर्नू